Okulindelwe Ekutshalweni Kwezimakethe Zakho | Martech Zone
Sibe nemihlangano emibili emnandi izolo, omunye ube nekhasimende futhi omunye waba namathemba. Zombili izingxoxo bezingaphansi kokulindelwe ekubuyiselweni kotshalo-mali lokumaketha. Inkampani yokuqala ngokuyinhloko yayiyinhlangano yokuthengisa ephumayo kanti eyesibili kwakuyinhlangano enkulu ethembele kakhulu ekumaketheni kwe-database nasekuphenduleni ngeposi okuqondile.
Zombili lezi zinhlangano zaqonda, kwehla nedola, ukuthi isabelomali sabo sokuthengisa nesabelomali sokumaketha kubasebenzela kanjani. Inhlangano yokuthengisa iqonde ukuthi, lapho umthengisi ngamunye eqashiwe, bangalindela ukwanda okukhulu kwemikhondo evaliwe. Inhlangano yesibili iqala ukubona ukuncipha kwembuyiselo ekukhangiseni okuqondile njengoba beqhubeka nokwenza kahle imizamo yabo. Bayabona ukuthi ithuba ukuhamba online.
Ukhiye kuzo zombili izinhlangano ukubeka okulindelwe ekutheni imizamo yazo yokumaketha izokwenza kanjani ukubuya ngemizamo yethu ejensi yezentengiso engenayo. Ngokunikezwa leli thuba, ngicabanga ukuthi ama-ejensi wokumaketha angenayo ngenxa yezinkampani eziningi ngokubeka okulindelwe okubi. Imvamisa, bakholelwa ukuthi uma ikhasimende linesabelomali sokumaketha - bayasifuna.
Leli isu elibi kakhulu. Sesivele sikushilo lokho Ukumaketha kwangaphakathi kunokuncika, kepha kukhona amanye amasu asebenza kahle ngendlela eyisimanga futhi anembuyiselo esemthethweni ekutshalweni kwemali.
Isibonelo, uma iklayenti lisitshele ukuthi banesabelomali esilinganiselwe futhi badinga ukwakha isidingo esisheshayo ukuze bakwazi ukukhulisa inkampani yabo, nakanjani sizobaphoqelela ekukhokheleni okuningi ngokuchofoza ngakunye. Amakhasimende ethu asebenzisa i- Umphumela kwalokhu. Ukuhleleka nokwenza kahle kuyashesha futhi abantu bakwa-Evereffect basebenza ngokushesha ukuthola iklayenti kwimiphumela engalindeleka. Izindleko ngokuhola ngakunye zingaba phezulu, kepha impendulo nemiphumela mihle ngakho-ke kumnandi. Ngokuhamba kwesikhathi, uma iklayenti lisebenza nathi kumasu wokumaketha angenayo, angasebenzisa ukusesha okukhokhelwayo kwezimfuno zonyaka noma ukuhlehlisa ukuthengisa lapho kudingeka akhulise ukukhula ngaphandle kwemikhawulo yamanye amasu.
Umsebenzi wokuthengisa ophumayo umnandi, kepha kuthatha isikhashana ukukhulisa isisebenzi. Sibona ukuphuma okuphuma phambili kwenza kahle kakhulu - ngokuhamba kwesikhathi - lapho izingxoxo ezinkulu zidinga ukunakekelwa nobuchwepheshe bomeluleki omkhulu wezentuthuko kwezamabhizinisi. Ngeshwa, noma kunjalo, umuntu ufinyelela umkhawulo ophakeme… futhi lapho befika, kufanele uqashe futhi uqeqeshe abantu abathengisayo abaningi. Futhi, asibukeli phansi umthelela wochwepheshe bezentengiso abaphumayo. Sizama nje ukusetha okulindelwe.
Ukukhangisa kuvamise ukuba nezindleko eziphansi nembuyiselo ephansi kulokho kutshalwa kwezimali. Kodwa-ke, ukukhangisa kuvame ukufaka isandla ekubonakaleni komkhiqizo futhi kungasiza ekunciphiseni ukuthengisa. Asiphikisani nokukhangisa, kepha uma ukufunwa kanye nekhwalithi yemikhombandlela kumele ibe phezulu, singaluleka amaklayenti ethu ukuthi atshale imali kwezinye izindawo.
Ukumaketha kwangaphakathi usebenzisa isu lokuqukethwe elisebenzayo kuhlukile ngandlela thile futhi kubambe ukuthandwa ngenxa yomthelela omkhulu nezindleko eziphansi ngokuhola ngakunye. Kodwa-ke, akuyona i-generator yesidingo esheshayo. Amasu wokuqukethwe asebenzisa zombili izindlela zokucinga nezenhlalo imvamisa kuthatha isikhathi ukwakha umfutho. Njengoba kungumzamo oqhubekayo, inkampani ihlanganisa imiphumela ngokuhamba kwesikhathi. Lokho wukuthi, njengoba unikela ngokuqukethwe namuhla, okuqukethwe okubhale enyangeni edlule kusasebenza ukushayela ukuholela kuwe.
Futhi, amasu wokumaketha angenayo anganikeza amathuba okuthola amaphuzu ukuze abone kangcono imikhondo efanelekile kakhulu evela kokungathandeki kangako. Ukumaketha okungenayo nakho kunganikeza imininingwane eyengeziwe ngethimba lakho eliphumayo ukuze lihlakaniphe ngokwengeziwe ngenhloso yethemba. Ukuqonda ababekufunda, lokho ababekufuna futhi bathatha imininingwane yefomu kungalungisa futhi kuvalwe imikhondo ngokushesha nangempumelelo.
Isinqumo sokutshala imali ekukhangiseni okungenayo ngokuvamile sinengqondo uma unecebo elilungile nezinsizakusebenza zokukwenza kahle. Lokho akusho ukuthi yisinqumo esifanele sayo yonke inkampani kuzo zonke izigaba, noma kunjalo. Njengoba unikezwe izinsizakusebenza ezilinganiselwe nezimfuno ezahlukahlukene, ungafisa ukusabalalisa isabelomali sakho nezinsizakusebenza kwamanye amasu. Okungenani okwamanje!
Tags: buyela ekutshalweni kwezimaliRIO
Iyaphendula Ngokuklanywa Kwe-imeyili Yeselula Esabekayo
UJun 20, 2013 ngo-9: 15 AM
Ngiyabonga ngalokhu. Ukukhokha ngokuchofoza ngakunye kuyindlela okufanele uhambe ngayo uma kunesidingo esisheshayo kepha kunezinye izindlela futhi, cha?